Nay Htun Naing – Institute for Strategy and Policy – Myanmar
AuthorNay Htun Naing
Nay Htun Naing is Deputy Director of Communications at the Institute for Strategy and Policy – Myanmar. He is also an Editor at The Myanmar Quarterly. He studied Bachelor of Economic at the Dagon University, Myanmar. He joined the media industry in 2005 and worked as Executive Editor for Weekly Eleven News Journal and The Daily Eleven Newspaper, and as Editor-in-Charge for Eleven Broadcasting. He has publishedabook and has produced more than five hundred articles in Myanmar language. In 2016 he received 'The Best Article Award for 140th Birthday of Thakin-Kodaw-Hmaing' ataremembrance ceremony ofaprominent nationalist leader Thakin Kodaw Hmaing.
မြန်မာ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့် တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်ဘက်-အရပ်ဘက် ဆက်ဆံရေးသည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ရှိနေပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာရမည့် ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယခုဆောင်းပါးတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လကို အစပြု၍ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ တစ်နှစ်ကျော် အချိန်အတွင်း အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အကြား ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေများကို အကျဉ်းချုံ့ တင်ပြမည် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် တပ်မတော်ကို ဥပဒေအရ အာဏာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း...
■ နိဒါန်း ၁၉၈၈ ခုနှစ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့ ဦးဆောင်ခဲ့သူတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်တဲ့အပြင် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့် NLD ပါတီက နုတ်ထွက်သွားခဲ့သူ၊ NLD ပါတီရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မောင် ကွယ်လွန်ခဲ့တာ ၁၃ နှစ် ပြည့်ပါပြီ။ ၁ ဦးကြည်မောင်နဲ့ ပတ်သက်ရင် သမိုင်းရှိတယ်။ သတ္တိရှိတယ်။...
အယ်ဒီတာမှတ်စု (အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂)
(၁) The Myanmar Quarterly မဟာဗျူဟာနှင့် မူဝါဒလေ့လာရေးဂျာနယ်ရဲ့ ဒုတိယမြောက် ခြေလှမ်း စာဖတ်သူများထံ ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ စာဖတ် ပရိသတ်များအား တောင်းပန်စကား ဆိုပါရစေ။ ပုံမှန်အားဖြင့် The Myanmar Quarterly ကို သုံးလတစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေဖို့ ရည်မှန်းခဲ့ပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းများကြောင့် နှောင့်နှေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှာ ထွက်ရှိရမယ့် ဂျာနယ်ဟာ...